राजेश भन्छन्–‘कलाकार औजार हुन्’ « Mazzako Online
राजेश भन्छन्–‘कलाकार औजार हुन्’
अभिनेता राजेश हमालले कलाकार औजार भएको बताएका छन् । साप्ताहिक पत्रिकामा अन्र्तवार्ता दिदै हमालले कलाकारलाई औजारको रुपमा चित्रित गरेका हुन् । अभिनेता हमालका अनुसार अहिले नेपाली सिनेमाले राम्रो कलाकारको खोजी गरिरहेको छ ।
उनले कलाकारलाई औजार भन्दै औजार आफै नचल्ने बताए । औजार चलाउनका लागि राम्रो सिप भएको व्यक्ति चाहिने भन्दै उनले ती व्यक्ति निर्देशक भएको बताएका छन् । अभिनेता हमालका अनुसार, नेपाली सिनेमामा राम्रो निर्देशक नै छैनन् ।
हमालले, आफूले कहिले पनि सिनेमाको छायांकन सुरु भएपछि निर्देशकलाई हस्तक्षेप नगरेको पनि बताए । कथा मन परेर काम सुरु गरेपछि निर्देशकमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने हलमाको भनाई छ । हमालले सिनेमा हाक्ने काम निर्देशकले भन्दा निर्माताले गर्ने भएकाले पनि सिनेमा उत्कृष्ट नबनेको बताए ।
करिश्माको आक्रोशलाई के भन्ने ?
वर्षाले नाई नभन्नु ल ६ गर्ने
के मायामा छिन् पूजा ?
छब्बिस बर्षमा अनमोल